Malla xaliyay Khilaafka labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya? – Kalfadhi
Wali waxaa taagan khilaafkii u dhaxeeyay labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya kaas oo hakiyay wada-shaqayntii u dhaxesay Baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ay ku dhawaaqeyn Guddoonka Aqalka Sare.
Ma jirto wax dadaal ah oo la sameeyay tan iyo markii uu khilaafkaan soo if-baxay waxaana la filayaa in dhowaan uu furmo Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Soomaaliya iyadoo uu wali taagan yahay Khilaafkii u dhaxeeyay labada Gole.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xiritaanka Kalfadhigii 4aad ka sheegay in uu xalin doono khilaafka labada Gole waxaana la sheegayaa in uusan Madaxweynaha u dhaqaaqin ilaa hada xal u helidda arintaasi.
“Waxaan xalin doonaa Khilaafka labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya markii uu xirmo Kalfadhigaan”, ayuu ka sheegay hadal uu ka jeediyay Xaflad casho sharaf aheyd oo lagu qabtay Villa Somalia markii la soo xiryay Kalfadhiga 4aad.
Sidoo kale Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa sheegay in ay isku howli doonaan sidii loo dhameyn lahaa khilaafka BFS. “Waxaan isku howli doonaa dhameenta mad-madowga jira ee u dhaxeeya labada Gole”, ayuu yiri mar sii horeysay Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo Aqalka Sare xubno katirsan ayaa xaqiijiyay in aysan jirin ilaa hada cid isku howshay arintaan walina uu taagan yahay Khilaafkii u dhaxeeyay Baarlamaanka Soomaaliya.
Senator Axmed Macalim Cumar (Nadiir) ayaa Kalfadhi u sheegay in uu wali taagan yahay Khilaafka Baarlamaanka, sidoo kalane la iclaamiyay waqtiga uu furmayo Kalfadhiga 5aad ee Aqalka Sare.
“Ilaa hadda ma jirto go’aan laga gaaray khilaafka, labada Guddoomiye ilaa hada iskama arkin arintaan waxa ayna u muuqaataa in ay sii jiri doonto wada-shaqayn la’aanta”, ayuu yiri Axmed Nadiir oo katirsan Aqalka Sare.
Senator Axmed Nadiir ayaa ku taliyay in hogaanka Dowladda Soomaaliya looga baahan yahay in ay raadiyaan xalka khilaafkaan waxa uuna ka digay Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Soomaaliya.
“Madaxweynaha iyo hogaanka kale ee dalka waxaan ka dalbanayaa in ay ka qayb qaataan sidii loo dhameen lahaa khilaafka, hadii uu sii jiro waxa uu saameynayaa shaqada Qaranka”, ayuu yiri Senator Axmed Macalim Cumar.
Xildhibaan C/raxmaan Mursal oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Kalfadhi u sheegay in arintaan ay ka dhalan karto in shaqada ay cuuryaamiso kadibna ay saameyso Soomaaliya iyo shaqada kale ee Baarlamaanka waxa uuna nasiib darro ku tilmaamay in aan ilaa hada arintaan la xalin.
“Hadii ay sii socoto waxay saameyn kartaa shaqada Baarlamaanka kadibna waxay saameynaysaa shaqada Qaranka”, ayuu yiri Xildhibaan C/raxmaan Mursal oo katirsan Golaha Shacabka.
“Madaxweynaha, Reysal Wasaaraha, iyo labada Guddoomiye ee Baarlamaanka waxaan ka dalbanayaa in ay qaataan doorkooda, macquul maahan in aan xal loo helin khilaafka Baarlamaanka”, ayuu yiri Xildhibaan C/raxmaan Mursal.
Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in la furo Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Soomaaliya waxayna noqoneysaa Kalfadhigii 2aad oo ku furma Khilaafka Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya. Furitaanka Kalfadhiga 3aad ayuu soo bilaawday mad-madowga u dhaxeeya Labada Gole markaas oo ay Aqalka Sare ka baaqdeen Xaflad si guud loogu qabtay Iskuul Buluusiya ee magaalada Muqdisho.